Madaafiic saakay lala dhacay Madaxtooyada Muqdisho kadib markii dadka degaankaasi loo sheegay in ay ka guuraan goobaha u dhow Villa Soomaaliya, Ciidamadii reer Puntland ee shalay weerartay Guure Ceel iyo Matabaan oo la sheegay in ay wateen gawaari cusub oo ay ka soo qaateen shacabka ku nool gobollada Koonfureed iyo madaxweyne Cabdullahi Yuusuf oo la sheegay in uu Itoobiya ka codsaday in ay hubka ka dhigaan beelo ka tirsan USC-da inta aysan dalka ka bixin. Ruunkinet 06/02/07
Waxaa saakay madaafiic lagu tuuray Villa Soomaaliya oo ah madaxtooyada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Madaafiicdan oo la sheegay in aysan geysan wax qasaaro ah ayaa ku dhacday goob aysan joogin wax dad ah.
Arrintan ayaa ka dambesay kagadaal markii saakay la xiray goobo ganacsi oo ku yiilay agagaarka madaxtooyada ayadoo dadka halkaasi degan lagu wargeliyay in ay ka guuraan guryo badan.
Warka ayaa intaasi ku daraya in dadka deggan barxadda Wardhiigley iyo goobo kale loo sheegay in ay ka guuraan ayadoo aan la garaneyn halka ay u guurayaan in kastoo warar aan la xaqiijin sheegayaan in goobaha dalka laga rarayo la dejin doono ciidamo laga keenay Puntland.
Dhanka kale, maleeshiya taageersan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sii jeeday Puntland kana tagtay Muqdisho iyo meelo kale ayaa shalay waxaa dagaal ku dhex maray Guure Ceel iyo Matabaan maleeshiya beeleed halkaasi degan.
Maleeshiyada reer Puntland ayaa la sheegay in halkaasi looga qabsaday gaari xamuul ah ayadoo aan weli la shaacin dhimashada iyo dhaawaca labad dhinac.
Ciidamada reer Puntland ayaa la sheegay in ay wateen gawaari cusub oo ay dad badan sheegeen in ay ahayeen kuwo laga qaatay dadka ku dhaqan gobollada Banaadir, Hiiraan iyo Shabeelada Hoose.
Dhinaca kale, warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ka codsaday dowladda Itoobiya in hubka laga dhigo qaar badan oo ka tirsan beelaha USCda inta ay ciidamadoodu kala bixin dalka.
Warkan oo aan ka helnay ilo muhiim ah ayaa sheegaya in beelaha ugu horeeya ee madaxweynaha doonaya in hubka lagu dhigo ay yihiin beelaha Habargedid iyo kuwa ay u arkaan in ay taageersan yihiin beelahaasi.